प’क्रा,उ परेका एक जोडीले पुलिसकै कारमै यस्तो गरेपछि प्रहरी नै आश्चर्यमा …. – Ujyaalo Patrika
प्रहरीले नियमित जाँ,चका क्रममा एक दम्पतिको सवारी साधनलाई बाटोमा रोक्छ । प्रारम्भिक अवस्थामै उनीहरुले मा ‘प से गरेको थाहा हुन्छ । प्रहरीलाई उनीहरुको गतिबिधि ठीक लाग्दैन र आफ्नो कारबाट उत्रेर प्रहरीको भ्यानमा बस्न भन्छ । उनीहरु प्रहरीको भ्यानमा बस्छन् पनि तर उनीहरु त्यही रति रा’गमा लि’प्त हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा प्रहरीको प्रतिक्रिया के होला?
युएसए टुडेका अनुसार अमेरीकाको फ्लोरिडा राज्यमा यस्तो एक घटना भएको छ । प्रहरीले प’ क्रा उ गरेको ती दम्पतिले प्रहरीको कारमै स’म्प र्क राखे । दम्पतिहरु मा’प’ सेमा परेको र उनीहरुको मुखमा केही मात्रामा र’ ग’त देखा परेको हुँदा दम्पतिलाई फ्लोरिडा प्रहरीले गि’ र फ्ता’र गरेको थियो ।
सोही क्रममा दम्पतिलाई पछाडीको सिटमा राखिएको थियो । दम्पतिहरु कारमै उ ‘त्ते ज्जि त भएर स’म्प ,र्क गर्न थालेपछि प्रहरीले कार रो क्यो । कारको पछाडि हल्लिएपछि रोकेर हेर्दाको दृश्य देखेर प्रहरी आश्चर्यमा पर्यो ।
सिटमा बस्दै दम्पतिहरु यौ ‘न सम्बन्ध राखेका थिए । दम्पतिहरुको नाम आरोन थोमस र मेगन मंदोरानो रहेको छ । केही बेर पछि पुलिसले ढोका खोल्दा थोमस न’ ग्न र मेगन अर्ध ‘न ‘ग्न अवस्था देखा परेका थिए ।
मा’ प/से टेस्ट गर्न नमानेको भएर दम्पतीलाई प्रहरीले गि’रफ्ता’र गरेको थियो । न/’ग्न अवस्थामा प्रहरीले निकाल्दा आ ‘रो ‘पीले प्रहरीलाई ध ‘के ‘ले र गरेर भा/ग्न सफल भएको थियो । यस क्रममा मेगनले पनि अर्को प्रहरीलाई हा’ने र भा/ग्न खोज्दा उनलाई समा’तेको थियो ।
प्रहरी लाई कु’ ट ‘पि ‘ट र आफ्नो अं/ग देखाउने अभि’योगमा उनीहरुलाई पुन हि’ रा’ स तमा लिइएको थियो । दुवैलाई १२५०० डलरको जरिवाना गरिएको थियो भने करिब ६० दिन जे’ लमा राख्ने आ दे श दिइएको थियो ।
Previous बाख्रा रुखमा चढेको भिडियो भाइरल, : (हेर्नुस् रमाइलो भिडियो सहित )
Next यी युवतीको १ करोड ९४ लाखसँग यौ,न,स,म्प,र्क गर्ने वाचा, तर ४ सयसँग नै थाकिसकिन्